Dowladda Jabuuti ayaa soo dhaweysay go'aanka ay Qaramada Midoobay cunaqabateyntii hubka iyo xayiraadaha kaleba uga qaadday dalka Eritrea, tallaabadan ayaana dadka qaar ku noqotay mid lama filaan ah, maadaama horay ay Jabuuti mowqif adag uga taagneyd arrintaas, kuna talineysay inaan Eritrea laga qaadin cunaqabateyntaas.
Labada dal ee Jabuuti iyo Eritrea oo daris ah ayaa in muddo ahba isku mari la'aa muran salka ku haya xuduudda, iyagoo ciidamadooda uu dagaal culus ku dhex maray xudduudda.
War murtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Jabuuti oo uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa lagu yiri "dowladda Jabuuti waxa ay soo dhaweyneysaa qaraarka Qaramada Midoobay ee uu tirsigiisu yahay 244 ee xallinta khilaafaadkii u dhexeeyay dowladaha Jabuuti iyo Eritrea".
Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu qeexay sida ay Jabuuti diyaar ugu tahay xalka "waxaan aqbaleynaa go'aanka lagu fududeynayo wax kasta oo lagu wada hadlayo oo ku aaddan dowladaha Eritrea iyo Jabuuti".
Arrintaas ayay Jabuuti qaarkood u aragtay in Somalia ay "la safatay Eritrea", xilli labada dal ay is hayaan, horayna uu gacan ka hadal u dhex maray.
Sidaas awgeed, hadda iyadoo wali uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya labada waddan ee Jabuuti iyo Eritrea, ee salka ku haya muranka xadka ayaa su'aalo badan la iska weydiinayaa waxa keenay in xukuumadda Jabuuti ay soo dhaweyso go'aanka qaramada Midoobay ay hubka ugu fasaxday waddanka ay is hayaan.
Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa BBC-da uga warramay waxa xilligan Jabuuti ku kalifay iney aqbasho go'aanka cunaqabateynta looga dul qaaday Eritrea.
"Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waa nin runtii fahansan waxa uu rabo inuu helo, waa nin doonaya in xal waara laga gaaro xurgufta kala dhaxeysa Eritrea iyo Itoobiya, waa nin ay ka go'an tahay inuu Dumeyra dib ugu soo celiyo Jabuuti. Marka wuxuu rabaa in xuquuq badan loo oggolaado. Wuxuu doonayaa inuu heshiis buuxa dhex maro Jabuuti iyo Eritrea, ka dibna dib Jabuuti loogu soo celiyo Dumeyra", ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
"Eritrea iyo Itoobiya markey dagaallameen, maxkamadda adduunka waxay go'aamisay in badda dib loogu celiyo Eritrea, dowladda Itoobiyaha way oggolaatay go'aankaas weyna u celisay, isla sidaasoo kale ayuu rabaa madaxweyne Cumar Geelle".